Los Cristianos အနီးရှိ Papaya စိုက်ခင်း + အိမ်။
ပင်မစာမျက်နှာLos Cristianos အနီးရှိ Papaya Plantation + House!
Los Cristianos အနီးရှိ Papaya Plantation + House!
အလွန်ကောင်းသောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း! အငြိမ်းစားယူခြင်းကြောင့်ရောင်းရန်။ ၃၀.၀၀၀ စတုရန်းမီတာကို အခြေခံ၍ သင်္ဘောသီးစိုက်ပျိုးခြင်း။ အပင် ၃၀၀၀ နှင့်ကြံစည်ပါ။
သင်္ဘောသီးတစ်ခုစီသည် apx ပေးသည်။ တစ်နှစ်လျှင်အသီး 100 ကီလိုဂရမ်။ နှစ်စဉ်ရိတ်သိမ်းမှုမှာ apx ဖြစ်သည်။ သစ်သီးဝလံ 300.000 ကီလိုဂရမ်။ တစ်ကီလိုလျှင် ၁ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချသည့်တိုင်အောင်တောင် finca သည် apx ကိုပေးသည်။ နှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းအမြတ်ယူရို ၃၀၀,၀၀၀ ဟာယူရို ၇၀,၀၀၀ လောက်ပဲရှိတယ်။
ရေလောင်းခြင်းနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာဖြစ်စဉ်သည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမြေကွက် 100% ပြားချပ်ချပ်ပါ!
Finca တွင် ၁၀၀၀ m1000 ရေတိုင်ကီ၊ သိုလှောင်ခန်းများနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောရိုးရာအိမ်ဟောင်းတစ်လုံးလည်းရှိသည်။
TF-1 အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသို့စူပါအလျင်မြန်စွာဝင်ရောက်ပါ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနေနှင့်နွေရာသီရာသီဥတု!
Palm Mar ရှိပင်လယ်မြင်ကွင်းတိုက်ခန်း
Icod မှ Fantastic အမြင်များနှင့်အတူ Finca!
Icod က de Los Vinos, Tenerife
Taganana၊ Santa Cruz de Tenerife၊
စိတ်ကူးအိမ်မက်မက်ကက်စကိတ်မှအိမ်, Tenerife !!
Masca, စန်တီယာဂို del Teide, Tenerife
El Poris ရှိကမ်းခြေအနီးရှိစီးပွားရေးတိုက်ခန်း။